John Kerry oo Gaaray Jabuuti Dhaqaalana U Balanqaaday Qaxootiga Yemen – Radio Muqdisho
John Kerry oo Gaaray Jabuuti Dhaqaalana U Balanqaaday Qaxootiga Yemen
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Dowladda Mareykanka, John Kerry ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tagay dalka Jabuuti, iyadoo Garoonka Jabuuti ay ku soo dhaweeyeen madax ka tirsan Dawladda Jabuuti,oo uu horkacayay Madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle.
Mr. John Kerry ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda, Maxamuud Cali Yuusuf, waxaana ay ka wada hadleen arrimo kale duwan oo la xiriira labada dal ee Jabuuti iyo Mareykanka.
Xoghayaha arimaha Dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa intii uu booqashada ku joogay Jabuuti booqdey saldhigga ay Ciidamada Mareykanka ku leeyihiin dalkaasi, kaasi oo ah kan ugu weyn Geeska Afrika.
John Kerry ayaa sida la xaqiijiyey Dawladda Jabuuti ugu deeqay dhaqaale aad u xooggan, kaasi oo loogu magac darey Gurmad-cusub, waxaanna dhaqaalahu uu gaarayaa 68 milyan oo US Dollar ah, ayadoo 16 Milyan Us Dollar oo lacagtaas kamid ah loo qoondeeyey qaxootiga kasoo cararaya Yamen ee Jabuuti ku Sugan.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Dowladda Mareykanka John Kerr ayaa isla maanta gellinkii dambe u dhoofay boqortooyada Saudi Arabia isagoo kala hadli doona madaxda dalkaas sidii shacabka Yemen loo caawin lahaa, wuxuuna kaga dhawaaqi doona Sucuudiga yabooh lacageed oo Mareykanku uu ku caawinayo Yemen.
Safarka Maanta Jabuuti uu ku tagay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Dowladda Mareykanka ayaa waxa uu qeyb ka yahay safaro uu ku marayay wadamada Geeska Africa, iyadoo shalay magaalada Muqdisho uu ku yimid safar taariikhi ah islamarkaana kulamo uu kula qaatay madaxda dalka magaalada caasimada..
Siminaar ku saabsan sare u qaadidda aqoonta ganacsatada oo lagu qabtay Muqdisho